Krizy ny asa: mitombo ny mivelona ivelan’ny ara-dalàna | NewsMada
Krizy ny asa: mitombo ny mivelona ivelan’ny ara-dalàna
Voadona mafy ny tontolon’ny asa noho ny fihanaky ny aretina Covid-19. Hita ny voka-dratsy aterak’izany eo amin’ny lafiny toekarena sy ny sosialy maneran-tany. Tsy afa-bela amin’izany ny eto Madagasikara. Koa mahazo vahana hatrany ny fahantrana any ambanivohitra nefa iankinan’ny fiveloman’ny maro anisa ny fambolena. Tsy misy fivoarana ny any ambanivohitra raha jerena ny vokatry ny fambolena. Izay endriky ny fahantrana any ambanivohitra izay, mitarika fifindra-monina an-tanàn-dehibe, mampitombo ny asa ivelan’ny ara-dalàna. Vao mainka mitombo ny isan’ny mivelona amina sehatra tsy ara-dalàna an-tanàn-dehibe miampy ireo mpitsoa-ponenana avy any ambanivohitra.
Asa sivy amin’ny 10 izao ny ivelan’ny ara-dalàna ka maro anisa indrindra amin’ireo ny any ambanivohitra. Ny hita amin’izany, ireo miasa tena anatin’ny fepetra tsy misy fivoarana. Ny angady, efa fampiasa taona maro tany aloha, ohatra, mbola tsy afa-miala amin’izany ny taranaka ankehitriny. Amin’izay ivelan’ny ara-dalàna izay, mihanaka amin’ny tanàn-dehibe ny varotra, ny asa tanana, hatramin’ny fitaterana misy mangalatra manao izany amin’ny fomba tsy ara-dalàna, toy ny taxi-moto eto an-dRenivohitra.
Covid-19 anatin’ny tontolon’ny asa
Satria olana ny asa, niombon-kevitra, tamin’ny 2020, ny Fikambanana iraisam-pirenena momba ny asa (OIT) sy ny Vondron’ny indostria eto Madagasikara (Gem). Niarahan’ny roa tonta nanohana (basket fund) ny mpiasa amin’ireo orinasa tratran’ny krizy.
Nisy koa ny fanadihadiana niarahana amin’ny Onudi nijerena ny akon’ny Covid-19 anatin’ny tontolon’ny asa: asa very na atahorana ho very, mpiasa vehivavy, tanora, sembana, mpiasa ivelan’ny ara-dalàna. Avy amin’izany fanadihadiana izany ny namolavolana laminasa hanarenana ny toekarena sy ny sosialy.
Mbola tsy hita soritra anefa izany hatramin’izao, raha jerena ny fitombon’ny very asa sy ny tsy anasa. Ny OIT, ny fanjakana, ny mpampiasa, ny mpiasa, samy tompon’antoka amin’ny ady atao amin’ity valanaretina ity. Tanjona ny fiarovana ny fahasalamana sy ny hitsinjovana ny orinasa.